Mustafe Martinow midh waan kugu taageeray , Midh na waan kaala tallinayaa iyo midh aan kugu la tallinayo!! Dr.khadar-Libaaxley. | Xeegonews.com
Salaan kadib: mustafe maxamed ( martin) waxa aad tahay aqoonyahan , aftahan qurbaawiya, dhiiran, isku kalsoon, karti u leh cabiraada dareemada ka ratib-ma dhacdooyinka siyaasiyga ah ee midabada iyo dhinacyada badan leh ee khuseeya jamhuuriyada Somaliland; qof ahaan waan taageeraa, dhiiri-galiyaa qof kasta oo karti u leh garaacista al-baabada wanaaga dan u ah dhamaan.
waxa aan kula ayidayaa aragtida ah ( in calanka Somaliland dibu-qaabeyn lagu sameeyo ) oo lagu daro ( jeex buluug ah) oo u taagan calanka cirka, badaha iyo dhamaan qayb ka ah dalalka quwadaha dunida , gaar ahaan dhamaan dalalka reer galbeedka ; iyadoo ujeedadu tahay- sir barako oo ku jirta; waxa aan si weyn kuula ayidayaa in ( xidigta madow) ee calanka Somaliland badhtan kan u yuurarta xidig ama xidigo cad-cad lagu badalo !! sababtoo ah waa habaar sidiisa u yaal; waayo ma jirto dunida xidig madow !! waa wax lala yaabo ! dalalkii dunida carabta ee xidigaha madoobaa maanta wey burbureen! Waa isla habaarka ay yaboohinayeen; maqaal aragtidan oo kale faafinaya waxa ku baahiyey warbaahinta maxaliga ah 1/27/2018.
* waxa aan si weyn kuula ayidayaa aragtida ah ( Solo Somaliland federal system ) Somaliland oo dawlad goboleeydyo ah; aragtidan 2017 ayaan illaa 5 maqaal oo faah-faahsan ku faafiyey baraha bulshada; waa aragti rumoobeysa maalinteeda insha’allah; waxa ay u baahantahay taxadir badan, waxay u baahantahay raggeedii soo saaxada siyaasada yimaada iyo dastuurka oo la furo.
Laba sababood aragtidani Somaliland oo federal ah ( United States of Somaliland =USS ) ay muhiim iyo mahuraan u tahay:
A)Nidaamka dawliga ah ee aynu haysano sida uu u yaalo marka laga yimaado hargaisa; dhamaan Awdal, Saaxil, Tog-dheer, Sool, iyo Sanaag magac mooyee ( hebel baa xil-noo haya mooyee) magac iyo manfac isa-saaran umma aha !!.
Tusaale: Awdal, Saaxil, Togdheer, Sool iyo Sanaag hadii gobol walba lasiiyo si is-xigta ( madaxweyne iyo 20 wasiir ) intuba gobol iyo dadkiisa waxba uguma filna sababta oo ah waxa ay ka soo xil-doonanayaan gobaladoodii waxa ay u soo xil-doonanayaan Caasimada Hargaisa oo rasmiyan dawlada xarunteeda ah ; xafiisyada ay u soo xil-doonteen marka ay ku fadhiistaan 80% subax-walba dadka ugu badan ee ay masuuliyiintani u shaqeeyaan waa reer hargaisa !! kaliya 20% ayaa ah dadka gobolada; lacag kasta oo soogasha 75% iyo ka badan Hargaisa ayey madaxdani ku cunaan!! Wax iibsiga ugu badan lacagta maalin laha ah kaga baxdaa waa meheradaha Hargaisa !! Cida ugu badan ee shaxaadaysa waa reer hargaisa!!, sidani waata horseed u noqotay ganacsiga xooga iyo xawliga leh ee hargaisa ka siraadan, in jagooyinka, guryaha kirada ah iyo maciishada hargaisa qaali marba sii laba kac-laynaya ka dhigay, in dadkii gobolada ka soojeeday hargaisa u soo guuraan, inta aan u soo guurin dhamaantood ay hargaisa u soo hanqal taagaan ( All eyes on Hargaisa) xaalka ka dhigay; halka xaalka goboladu noqdeen , wax laga hayaamay, inta aan hayaamina ay hiif ku joogto, meherado kacay iyo kuwo hargaisa sahan loogu soo maqanyahay.
B) Nidaam ka fadaraalka ah maaha fikir la inoo soo waariday oo ay tahay in aynu iskaga hayno hangool labadiisa faraaq; waxa uu mug iyo milgo leh uga qayb ahaa hab dhaqan nololeedkeenii hore taniyo jiritaanka isir keen!! Daliil waxa u ah, ( Hargaisa waa 4 daamood oo daan walba beeli ay isku xoontay meelaha qaar haba la wada yaalee) bal u fiirso gobolada yaa gobol walba reer ku ururiyey ama u badiyey gobol si sooc ah ? iyada oo sidan xaalku soo ahaa ayaa walaalo is-jecel oo tallo wada leh iyo tallo kala gaara ah la soo ahaa waligeed!! Ma leeka , mana qabato meesha marka la soo hadal qaado fadaraal in aynu sidii xoolaha u didno ; waayo waa hab dhaqan maamul nololeed keenii hore; sidan waxa ah oo aad wada ogtihiin, ( UK, USA, UAE and ethoipia ) iyadoo ingiriiskii dawladnimada ina baray ee aynu guridambeyska u aheyn yahay 4 dawladood oo isku hal dawlad ah yahay iyo maraykan kii aynu dastuurka ka dheeganay 54 dawladood oo isku hal dawlada yahay ; is-yeel yeel mooyee , ilama aha sabab Somaliland dimuquraadiyad goboladu ku dhacan yihiin oo Hargaisa oo kaliya dan u ah in aynu ku sii jirno ; waxa aynu u baahan nahay dimuqraadiyad ku salaysan dhaqankeenii iyo sidii aynu u soo nooleyn; dhamaan dadka reer Somaliland waa ( one family) oo dan guud wada leh ; hayeeshee dano gaar ah kala leh oo tixgalintooda iyo hoos u eegi dooda
Waxa aan kaala tallinayaa mustafe martinow :
Iyada oo Somaliland ka dhacday doorasho xor ah oo xalaal ah, taas oo ay ka qayb qaateen badi reer Somaliland iyadoon qofna qof aanu khasbeyn, oo ay goob joog ahaa yeen dhamaan ergooyinka dawladaha daneeya dimuqraadiyada iyo geedi socodka Somaliland isla mar ahaantaan duhur cad badi dadweynaha reer Somaliland calmadeen xisbiga iyo madaxweynaha hada xilka haya mudane muuse biixi cabdi iyo c/raxmaan c/laahi ismaciil saylici; waxa reeban oo xaaraan ah in adiga oo aan tacab galin balse caadifadeysan dibada ka tidhaahdo ( madaxweynaha dibad wareega ah ee Somaliland ayaan ahay; maad mooyee cidina kaa dhageysan mayso ) nidaamka aad u socoto waxa la yidhaa ( wabareynta 2018) ma banaana lafa jabisku, fulle ayaa laguu aqoonsanayaa hadaad sidaa ku sii wado; waayo ninka raga ah ee wax qoonsada ama wax saluuga maaha in uu banaanka ka soo shiitamo oo uu soo dhagax yeeyo dadkiisa iyo dalkiisa; sax waxa ah dalka iyo dadka koritaan baa u socda oo waxbadan baa yagleel ah, waxa aad saluugto nidaamka dalka u yaal dhexdiisa aragtiyo iyo doodo hufan ku dhis, tab iyo xeel wanaagsan adigoo u maraya.
Kulama dirirayo; kaliya waa tilmaan tudhaala leh; waayo reer abtigay baad tahay; waa lexo jeclo hadalkayganiye hadidaad ha u arkin.
Waxa aan kugu la tallinayaa mustafe martinow:
Madaama oo aad tahay nin reer Somaliland ah, madaama oo aad tahay aqoonyahan dalku tabayo, oo ay u muuqato baylah iyo goddoloolooyin tira badan, isla markaana ka seexan kari la’ dhibta isaga mooyee ay yartahay qayrkii in ay wax ka taraan;
Waxa aan si weyn kugu la tallinayaa oo aan kugu dhiiri galinayaa in aad hakiso wadeecada aad qurbaha ka soo faafiso; in aad timaado dalka xilliga ay haboonaato, xisbi aad sameysato afkaaraha quruxda badan ee kugu jira aad gun dhig uga dhigto, karti , tab iyo tacab aad la timaado, kalsooni buuxda waxa aan ku qabaa ( you will be the president of Somaliland sure insha’allah).
Ma ihi shaqsi neceb ama karahsan jiritaanka mabaa’diida Somaliland, qof kasta oo maanta nool aniga ayaa ka jecel Somaliland, dawladnimadeeda iyo in ay noqoto qaran buuxa oo ka mida qaramada dunida guudkeeda tamarta badan ku leh; waxa aan jeclahay toosnaanta , sinaanta iyo cadaalada aniga oo aan dafiraynin dheeraadka qaybaha illaahay ka mid ah ee la isdheer yahay.